Guddiga Anshaxa Doorashada oo eedayn u jeediyay Agaasimaha Telefishanka Qaranka iyo Maareeyaha Dekedda Berbera | Xarshinonline News
Guddiga Anshaxa Doorashada oo eedayn u jeediyay Agaasimaha Telefishanka Qaranka iyo Maareeyaha Dekedda Berbera
Hargeysa,(Nnn)- Guddida ilaalinta Anshaxa iyo habsami-socodka Doorashooyinka Somaliland, ayaa sheegay inay heleen cabashooyin ka soo yeedhay Xisbiyada Mucaaradka ah, isla markaana markii ay ka daba tageen ay ogaadeen in ay jiraan cabashooyinkaas, isla markaana waxay dhaliil u jeediyeen shaqaale ka tirsan Dawladda oo uu u horreeyo Agaasimaha guud ee Telefishanka Qaranka.
Guddidan oo shalay Shir-jaraa’id ku qabtay Hargeysa, ayaa sheegay in ay jiraan cabashooyin ka soo baxaya qaabka Ololaha. Waxaanu sheegay in qodobada qaarkood ay Xukuumaddu ku xad-gudubtay. “Ilaa iyo imika shaqo maalmeedkayaga waxaanu qabanaa dacwado badan oo ay soo gudbiyeen Xisbiyadu. Dacwadahaas oo aan darisnay oo aanu ku dedaalno in an ugu jawaabno qoraal. Dacwadahaas waxaa ka mida qaar aan culays badan lahayn oo arigtidayada aan miisaan culus lahayn, qaarna waa qaar guddigu ay u arkayaan in ay yihiin sharcigii oo la jabiyay oo lagu tuntay oo waliba markaanu digniin siinay aanay badalin habdhaqankoodii, markii aanu uga dignayna iska sii watay, iyagoon ixtiramayn heshiisyadii dhamaan xisbiyada qaranka ay ku heshiiyan oo ay tahay inaay si buuxda u fuliyaan.” Ayuu yidhi Warsaxaafadeedkaas oo uu akhriyay Guddoomiyaha Guddidan Axmed Maxamed Cadaad, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Guddigu markay baadhay heshiisyada la jabinayo, anagoo ay naga reeban tahay xag-jir ama hanaanka dhinac ah, waxaanu gaadhnay qaraaradan soo socda; Saddexdan qodob ayaana ah xadgudbiyaada aad ugu waawayn ee la jabiyay: 1-Warbixinta olaalaha doorshada ee talifishanka qaranka, 2- Isticmaalka gaadiidka dadwaynaha ee xisbiyada qaranka iyo 3- Ololaynta firfircoon ee shaqalaha dawlada.” Sida ku qoran heshiiska habdhaqanka xisbiyada siyaasadeed (code of Conduct) Telifishanka Qaranku waa Hay’ad ummadda u dhaxaysa oo laga filayo in ay olalaha doorashada si xor iyo xalaal oo siman ay ugu warbixiso, ummaddana siiso wakhti ku filan dhamaan xisbiyada siyasadeed ee ku tartamaya codadka dadwaynaha Somaliland.”
Guddoomiyaha Guddidani wuxuu sheegay in ay digniino u jeediyeen Agaasimaha Telefishanka Qaranka, balse uu iska dhego-tiray. “Ilaa imika anagoo digniin badan siinay una yeedhany sarkaalka masuulka ka ah Telefishanka qaranka, anagoo mar labaadna u yeedhnay, una dignay oo uu noogu balan qaaday habdhaqankiisa ah cadaalad-darrada ah inuu uu saxayo hagaajinayayana, iyadoo ay jirto waxaa soo dadaale ah oo an samaynay wax iska badalay habdhaqankiisi cadal darada ah ma jirto.” Ayuu yidhi Cadaad, waxaanu intaa raacciyay oo uu yidhi, “Imika waxaanu soo jeedinaynaa in guddiga Doorashada Qaranku tallaabo anshax marineed ka qaadaan sidu xusayo heeshiskii habdhaqanka siyaasadeed. Qodabka labad ee soo noqnoqanayaa waxaa weeya, sharci-darada xisbiga dawladda ee ujeedadiisa olalaha Doorashada u isticmaalaya gaadiidka dadwaynaha. Waxaanu aad ula soconaa meelo badan oo wadanka ka mida oo arrimahaasi ka dhaceen sidaa ay noosoo sheegen wakiiladayada jooga gobalada oo ay noo soo tabiyeen. Waxaanu idin xusuusinaynaa sidaad idinkuna ogtihiin in ay tahay hanti dadwayne oo cashuurtii dadwaynaha laga qaday lagu soo iibiyay. Sida saddexda Xisbi wada saxeexeen waxay jabinaysa heshiiska habdhaqanka, kaasoo ah ka naloo igmaday in aan ku shaqayno, ilaalinana hadaanu nahaye Guddiga. Guddidu waxay ku adkaysanaysaa in heshiiska ay wada galeen sedexda xisbi ay wada ixtiraaman.”
Waxa uu aakhirkii Guddidani ku baaqay in qof kasta oo ku guulaysta Doorashada loo hanneeyo, “Waxay dadwaynhu ka rajaynayaan murashaxiinta inay si buuxda u ixtiraaman natiijada ka soo baxda doorashada xisbigii doonaba ha ku guulaysto.
Waxaan idinku balan qaadayna inaanu si dhexdhaxaad, cadaaladna ah hawshayada u gudano ilaa iyo inta doorashada ka dhacayso.” Ayuu yidhi Cadaad.
← Madaxweyne Rayaale iyo Axmed Yuusuf Yaasiin oo Guryo Qurux Badan Dhistay & Marwo Kaltuun Xaaji Daahir oo Hargeysa kaga Jirta Aqal Kiro ah
Beesha Bariga Hargeysa ( ISAXAAQ) oo taageertay Xisbiga UCID →